२ कार्तिक २०७५ | October 20, 2018
​कप्तानबाट किन हटाइयो सन्दीप लामिछानेलाई ?
Sunday, 27 Aug, 2017 12:05 PM
काठमाडौं, भदौ ११ ।
नेपालको यू–१९ क्रिकेट टिमका कप्तान परिवर्तन भएका छन् । सन्दीप लामिछानेलाई कप्तानबाट हटाएर अर्का क्षमतावान खेलाडी प्रदीपसिंह ऐरीलाई कप्तानीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मलेसियामा आउँदो सेप्टेम्बरमा हुने १९ वर्षमुनिको एसियाली क्रिकेट (पूर्वी क्षेत्र) का लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको हो । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र १९ वर्षमुनिको टोलीका प्रशिक्षक विनोदकुमार दास रहेको छनौट समितिले प्रारम्भिक टोलीमा परेका खेलाडीबाट अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो ।
आउँदो सेप्टेम्बर ८ देखि १७ सम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगिताका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीमा चार वैकल्पिकसहित १८ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा भएको हो । सन्दीप खेलमा क्षमतावान भएपनि कप्तानीमा जम्न नसकाले दीपेन्द्रलाई कप्तानीको जम्मा दिइएको स्रोत बताउछ ।
टोलीमा को को परे ?
१) दिपेन्द्रसिंह ऐरी (कप्तान) २) सन्दिप लामिछाने३) मोहम्मद असिफ शेख४) सन्दिप सुनार५) प्रनित थापा मगर६) पवन सराफ७) अनिलकुमार साह८) रोहितकुमार पौडेल९) किशोर महतो१०) शाहब आलम११) नन्दन यादव१२) बिक्रमकुमार भुषाल १३) सन्दिप जोरा १४) सुमित महर्जन
१) कमल सिंह ऐरी२) ललित नारायण राजवंशी३) प्रकाश केसी४) रिजन ढकाल
प्रतियोगिताका लागि प्रारम्भिक टोलीमा परेका खेलाडीको बन्द प्रशिक्षणपछि अन्तिम टोली घोषणा गरिएको हो । नेपाली टोली आउँदो सेप्टेम्बर ८ मा मलेसिया प्रस्थान गर्नेछ ।
आठ देश सहभागी रहने प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा परेको छ । नेपाल रहेको समूहमा सिंगापुर, थाइल्याण्ड र भुटान छन् । यस्तै समूह बी मा आयोजक मलेसियासहित हङकङ, चीन र म्यानमार छन् । प्रतियोगिताको टाइ सिट सार्वजनिक भएको छ । प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने दुई टोली १९ वर्षमुनिको एसिसी एसिया कप क्रिकेटका लागि छनौट हुनेछन् ।
​दशैंको दिन उपत्यकामा ट्याक्सीद्वारा मनपरि भाडा असुली